ओलीले लिए एमालेमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार ! « Bagmati Online
ओलीले लिए एमालेमा एकलौटी निर्णय गर्ने अधिकार !
प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा निर्णय गर्ने सबै अधिकार आफूमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सबै अधिकार आफूमा सीमित गरेका हुन्। स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित परिस्थितिका सन्दर्भमा सबै निर्णय लिने अधिकार दिएको हो ।
‘पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ,’ स्थायी कमिटी बैठकको चार बुँदे निर्णयको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरिदिएपछि एमालेभित्र शक्तिशाली बनेका ओलीले त्यसयता पार्टीभित्र आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन् ।
फागुन २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएर एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने र अवैधानिक ढंगले विधान संशोधन गरेका थिए। त्यसलगत्तै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर महाधिवशेन आयोजक कमिटी बनाएका ओलीले अध्यक्ष र महासचिव पदमात्रै राखेका थिए । चैत ७ गते वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।
चार नेताको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई ६ महिनाको लागि निलम्बनसमेत ओलीले गरेका थिए । यद्यपी आजको स्थायी कमिटी बैठकले चार नेताको कारबाही फुकुवा गरेको छ । यो स्थायी कमिटी पनि ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर वैशाख १० गते गठन गरेका हुन् । ओलीले नेपाल निकट ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए । फागुन २८ गते यताका सबै बैठकमा ओलीले आफ्ना एजेण्डा ल्याएर छलफल नगराइकनै पारित गराउने गरेका थिए । अब भने उनले बैठक समेत राख्न नपर्ने गरी अधिकार आफूसँग लिएका छन् ।